Thermomix को लागी समर व्यंजनहरु थर्मो रेसिप्स (पृष्ठ २)
9 व्यंजनहरु नुमाइलो र फल सहित
हामी स्वादिष्ट व्यञ्जनहरु को तयारी फल को आनन्द लिन जाँदैछौं। हामी सबैलाई चकित पार्न नौ महान व्यंजन प्रस्ताव।
के तपाइँ स्यान्डी म्याकडोनाल्ड आइसक्रीम को आदी हुनुहुन्छ? यो नुस्खा घर मा बनाउन को लागी प्रयास गर्नुहोस्। यसको स्वाद स्वादिष्ट छ र बनावट शानदार छ।
अक्टोपस सिभिस कुनै पनि समय रमाईलो गर्न एक आदर्श विधि हो। ताजा, छिटो, सरल र धेरै हल्का ... केवल k० किलो क्यालोरी।
के तपाईंलाई एक ताजा थाल आवश्यक छ जुन अग्रिम बनाउन सकिन्छ? टुनाको भरिएको अण्डाका लागि यो विधि बनाउनुहोस्। सम्पूर्ण क्लासिक!
रास्पबेरी भेनिला आइसक्रीम काट्नुहोस्
यो रास्पबेरी वेनिला कट आइसक्रीम तपाईंको मनपर्नेहरू मध्ये एक बन्छ। स्वाद पूर्ण, क्रीमयुक्त र एक फ्रिज बिना।
हल्का आम आइसक्रीम
मधुमेह रोगीहरूको लागि उपयुक्त नुस्खा खोज्दै हुनुहुन्छ? यहाँ एक ताजा प्रकाश आम आइसक्रीम छ। स्वादिष्ट र सजिलो !!
यस अनानास फोम बनाउन4कम्पोनेन्टहरू तपाईसँग प्रकाश, ताजा र पाचन मिठाई मिल्नेछ5मिनेट भन्दा कममा।
सुन्तला र कागतीको आइसक्रीम जार
सुन्तला र निम्बूको आइसक्रीम जार एक साधारण नुस्खा हो जसको साथ तपाईं फ्रिज बिना र स्वादिष्ट स्वादको साथ आइसक्रिम बनाउन सक्नुहुनेछ।
Dalgona brûlée कफी
क्याफे डाल्गोना ब्राली तपाईंको Thermomixm को साथ बनाउनको लागि एक स्वादिष्ट र सजिलो संस्करण हो। दिउँसो वा गर्मी दिउँसोको लागि आदर्श।
मस्कट चीज र अंगूर केक
यो चीज़केक र मस्कटेल अpes्गुर मलाई र एक विशेष मिठाई सेवाको लागि विभिन्न प्रस्ताव हो।
यो चेरी क्लाफुटिस चेरीलाई मसला दिन र गर्मी को सबै भन्दा राम्रो मजा लिन आदर्श छ।
चामल पुडिंग आइसक्रीम
यो स्वादिष्ट चामल पुडिंग आइसक्रीमको साथ तपाईं सबै परम्परागत स्वादको साथ एक फ्रोजन मिठाईको आनन्द लिनुहुनेछ। रेफ्रिजरेटर र बिना रेसिपी।
विदेशी बीट गाजापाचो
विदेशी बीट गजापाचो जुन हाम्रो तालुमा असंख्य स्वादहरू जगाउँदछ। यस गर्मीमा नियमितबाट बाहिर निस्कनु उत्तम।
मूल र स्वादिष्ट स्ट्रबेरी गजापाचो सँगै पर्मेसन चीजको क्रन्ची पानाको साथ, स्टार्टर वा एपेटाइजरको रूपमा आदर्श।
साल्मोरेजो हाम्रो ग्यास्ट्रोनोमीको परम्परागत विधि हो जुन ग्रीष्म inतुमा आफैलाई स्फूर्ति दिन मिस गर्न सकिन्न। सजिलो र स्वस्थ
पीच दही पप्सल्स
हामी तपाईंलाई दही र आडू पपसिकल्स कसरी बनाउने भनेर देखाउछौं ... तपाईं प्रतिरोध गर्न सक्नुहुन्न !! गर्मीमा तपाईंलाई शान्त बनाउने विधि।
चिसो तरबूज सूप
हामी तपाइँलाई कसरी एक साधारण चिसो तरबूजा सूप बनाउने देखाउछौं। छिटो र पौष्टिक जुन तपाईं गर्मी मा चिसो गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी तपाईंलाई कसरी फल दिन्छ र चल्दो दोहोरियामा शान्त बनाउन चेरी निम्बू पानी कसरी बनाउने भनेर हामी तपाईंलाई देखाउँदछौं।
Thermomix® को साथ परम्परागत गजापाचो तयार गर्नु साँच्चिकै आनन्दको कुरा हो। गर्मीको ताप को हराउन, सरल, पौष्टिक र आदर्श।
कागती शर्बत धेरै स्फूर्तिदायी, बनाउन सजिलो छ। यस गर्मीमा तपाइँको Thermomix® को साथ प्राकृतिक रीफ्रेश गर्नुहोस्
यस स्फूर्तिदायी आम शर्बेट तयार गर्नु सरल र बनाउनको लागि धेरै सजिलो छ। र यत्ति छिटो छ कि तपाइँ यो एक आँखा झिम्काउने मा हुनेछ।
Caramelized नट संग यो क्रीम आइसक्रीम को साथ तपाईं आफ्नो डेसर्ट वा गर्मी स्नैक्स मा एक नयाँ नोट राख्न सक्नुहुन्छ।
यो शाही स्वादिष्ट खाना कुनै पनि परिवारको खाना समाप्त गर्नका लागि आदर्श हो। एक उत्तम मिठाई, स्वाद पूर्ण र एक चिकनी बनावट संग।
फ्रोस्टेड ग्लास क्रीम र व्हिस्की
व्हिस्की क्रीम चिल्ड ग्लास साथीहरूसँग क्याजुअल डिनरका लागि उत्कृष्ट विचार हो। सफलता आश्वासन, सरल र छिटो।
त्यहाँ इम्मानाडास, एक आमलेट, पास्ता सलाद ... र पनि एक मीठो रेसिपी छन्। अब हामीले कहाँ भ्रमण गर्ने हो निर्णय गर्नुपर्नेछ
के तपाई आइसक्रिम प्रेमी हुनुहुन्छ? त्यसोभए तपाई पक्का यहर्ट आइसक्रिम नुस्खा मनपर्दछ। एक अपूरणीय आधारभूत।
स्ट्रबेरी जेलीको साथ दही चश्मा
यी स्ट्रबेरी जेली दही कपहरू यति धेरै आकर्षक छन् कि उनीहरू व्यक्तिगत कपमा सेवा दिनका लागि उपयुक्त छन्।
भेनिला मूस केक
तपाईं यस वेनिला मउसे केक अग्रिम बनाउन सक्नुहुन्छ। यस तरीकाले तपाईंसँग मखमल टेक्चरको साथ एक स्वादिष्ट मिठाई हुनेछ।
अचम्मको केक स्वादिष्ट छ, स्वादले पूर्ण छ र सबै भन्दा राम्रो थर्मोमिक्समा छ - यसलाई बनाउन सजिलो छ।
गर्मी को समयमा तपाइँलाई शान्त पार्न एक विधि खोज्दै हुनुहुन्छ? कुनै पनि अधिक प्रतिरोध र यो एप्पल vichyssoise प्रयास नगर्नुहोस्। तपाईं यसलाई मन पराउनुहुनेछ।
दही र अखरोट सॉसको साथ किवी मिठाई
पत्ता लगाउनुहोस् कि यो Themmix को साथ दही र अखरोट सॉसको साथ स्वादिष्ट किवी डेसर्ट तयार गर्न कत्ति सरल छ।
दही केक द्रुत र सहज गर्न Thermomix को साथ। यो सधैं यसको ताजा स्वाद र बनावटको लागि सफलता हुन्छ।
केरा स्मूदी हल्का खाजाको लागि र बच्चाहरूलाई फल र दुध पिई महसुस नगरी राम्रो विचार हो।
Thermomix को साथ यी अनानास कस्टर्डहरू तयार गर्न धेरै सरल छ। तपाईं २ भिन्न र समान समृद्ध बनावटको पनि आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
प्लमको साथ Gazpacho
यसमा धेरै सिरका, लसुन वा प्याज छैन। त्यसकारण केटाकेटीलाई यो धेरै मनपर्दछ। थप रूपमा, प्लमले तपाईंलाई मनपर्ने एक मिठो स्पर्श दिन्छ।
क्रीमयुक्त स्याउ र दालचिनी आइसक्रीम
यस गर्मीमा तपाईंले क्रीमयुक्त स्याउ र दालचिनी आइसक्रीमको मजा लिन सक्नुहुनेछ तपाईको थर्मोमिक्सको साथ मात्र २ मिनेटमा।
क्यालोरी गणना नगरी ग्रीष्म eatतुमा खाना खानु
व्यंजनहरु को संग्रह यो क्यालोरी गणना नगरी गर्मी को खान को लागी आदर्श हो। त्यसैले तपाईं एकै समयमा छुट्टीहरू र तपाईंको स्वस्थ आहारको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
Sels अतुलनीय रेसिपीहरू
यस गर्मीमा सिपीहरू रमाउन inc अविश्वसनीय रेसिपीहरू, उत्तम पोषण गुणका साथ सस्तो, सस्तो उत्पादन।
हरियो सिमी, जेनोइज पेस्टो र आलुको साथ पास्ता
हामी Thermomix मा पेस्टो तयार गर्नेछौं र हामी ग्लासमा आलु र सिमी पकाउछौं। यस बीच हामी पास्ता पकाउनेछौं र त्यसपछि सबै मिश्रण गर्दछौं।
Thermomix को साथ बनेको9मूल रूसी सलाद व्यंजनहरु
Thermomix को साथ बनेको9मूल रूसी सलाद व्यंजनहरूको यस कम्पाइलेशनको साथ तपाईंले स्वादले भरिएको ग्रीष्म पट्टिको आनन्द लिनुहुनेछ।
पारंपरिक meringue दूध Thermomix को साथ बनेको
अब तपाईं एक साधारण तरिकामा Thermomix को साथ बनेको एक स्वादिष्ट पारंपरिक meringue दूध तैयार गर्न सक्नुहुनेछ र गर्मी मा ठंडा।
भूमध्य स्वाद भरिएको टमाटर चामल गार्निशको साथ
टमाटरको मौसम सुरु हुन्छ। त्यसकारण यो आजको रेसिपीबाट आनन्द लिने उत्तम समय हो: केही महान व्यक्तिहरू ...
तपाइँको गर्मी appetizers को लागी9व्यंजनहरु
तपाइँको गर्मी स्नैक्सको लागि rec रेसिपीहरूसँग यो संकलनको साथ तपाइँ तपाइँको Thermomix को साथ बनेको सबैभन्दा सरल र सबैभन्दा स्वादिष्ट स्नैक्सको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
क्रीमयुक्त नीबू आइसक्रीम
यस गर्मी मा तपाइँको Thermomix र एक सरल तरीकाले घर मा बनेको एक मलाईदार लेमन आइसक्रीम को मजा लिनुहोस्। तपाईं यसलाई फ्रिज बिना पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
Finger औंला-चाट बर्गर व्यंजनहरु
त्यहाँ मासु, माछा, तरकारीहरू छन् ... यो कम्पाइलेसनमा तपाईले सबै स्वाद र आवश्यकताको लागि ha ह्यामबर्गर व्यंजनहरू फेला पार्नुहुनेछ।
गर्मी तातो हराउन9चिसो सूप
गर्मीसँग लड्नको लागि cold चिसो सूपहरू Thermomix को साथ बनेको ग्रीष्म forतुका लागि व्यंजनहरुको एक आवश्यक संग्रह हो र यो तपाईको रेसिपी बुकबाट हराउन मिल्दैन।
Cream क्रीमी ह्युमस नन स्टप फैलिन्छ
तपाईंको पार्टीहरू वा अनौपचारिक गर्मी भोजमा साथीहरू र परिवारलाई चकित पार्न तपाईंसँग पहिले नै9क्रीमयुक्त ह्युमस छ।
ल्याक्टोज फ्री नमकीन कारमेल आइसक्रीम
यो ल्याक्टोज फ्री नमकीन कारमेल आइसक्रीम र तपाइँको Thermomix को साथ तपाइँले १००% ताजा गर्मीको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। फ्रिजको साथ र फ्रिज बिना रेसिपी।
चिसो एवोकाडो, हरियो स्याउ र लाइम क्रीम
यो चिसो एवोकाडो, हरियो स्याउ र लाइम क्रीमको साथ तपाईंसँग तपाईंको Thermomix को साथ २ मिनेटमा स्वादिष्ट र तयार पहिलो कोर्स हुनेछ।
क्रीमयुक्त र उत्तम सलोमर्जो रेसिपी जुन हामीले गोप्य घटक थपेका छौं: सिरपमा पीच। यो एक अद्वितीय पकवान बनाउँछ!
भरिएका टमाटरहरू बनाउन rec रेसिपीहरू
यस गर्मी को लागी5शानदार भरिएका टमाटर व्यंजनहरु। हामी क्लासिक टमाटर सलाद छोड्न र हाम्रो धेरै फरक डिनर प्रस्तुत गर्न सक्छौं।
यस गर्मी को लागी9विदेशी gazpachos
Original मौलिक गजापाचोस, स्याउ, चेरी, स्ट्रबेरी, गाजर, खरबूजा, बीट, अpes्गुरबाट बनेको ... त्यहाँ सबै स्वादका लागि केहि छन्।
यस गर्मीमा तपाईलाई हाइड्रेट गर्न ref स्फूर्तिदायी पेय
Thermomix को साथ बनेको स्फूर्तिदायी पेयहरूको संकलनको साथ तपाईं राम्रो हाइड्रेटेड हुन सक्नुहुनेछ र गर्मीको पूर्ण आनन्द लिनुहोस्।
किसमिस संग रम आइसक्रीम
रम किशमिश आइसक्रीम एक क्लासिक हो जुन तपाईं आफ्नो छुट्टीमा छुटाउन सक्नुहुन्न। यसलाई तपाईंको Thermomix को साथ सजिलै घरैमा तैयार गर्नुहोस्।
हार्ड-उमालेको अण्डा संग समुद्री प्याट
धेरै सजिलो समुद्री पेटी, स्वादले भरिएको र साधारण सामग्रीहरूको साथ। यसमा सिपी कीरा, सार्डिन, म्याकेरल र दुई कडा उमालेको अण्डा छ यसलाई स्थिरता प्रदान गर्न
यस गर्मीमा super सुपर-रिफ्रेसि s शर्बतहरू
यस गर्मीले मौलिक सुपर-रिफ्रेसि stra स्ट्र्राको साथ यो शानदार कम्पाइलेसनको आनन्द उठाउनुहोस् जुन बनाउन सजिलो छ।
टमाटर भातले भरिएको छ
यस गर्मीमा टमाटरको उपभोग गर्ने बिभिन्न तरीका: बासमती चामलले भरिएको, धेरै तुलसी, बेकन, मोज्रारेला ... र बेक्डको साथ।
यस गर्मी को लागी9उत्तम चिसो क्रीम
यस गर्मी को लागी fant शानदार कोल्ड क्रीम रेसिपी संग महान संकलन। स्टार्टरको रूपमा उत्तम, तिनीहरूलाई काममा वा पिकनिकमा लैजानुहोस्।
यस घरेलु चेरी जामको साथ गर्मीको स्वादको आनन्द लिनुहोस् जुन तपाईं टोस्ट र डेसर्टहरू तयार गर्न सक्नुहुन्छ। Thermomix को साथ गर्न सजिलो।
PEAR र gorgonzona vichyssoise
एक चिल्लो र स्वादिष्ट क्रीम: नाशपाती vichyssoise र gorgonzola चीज। एक उत्तम स्टार्टर आश्चर्यचकित गर्न र एक धेरै मूल स्पर्शको साथ।
चेरी आइसक्रीम र दही
यस चेरी दही आइसक्रिमको साथ गर्मीको आनन्द लिनुहोस्। एक मलाईदार मिठाई, केवल ingredients सामग्रीको साथ र केही मिनेटमा Thermomix को साथ तैयार।
चिसो मटर, सलाद र पुदीना क्रीम
मटरको यो चिसो क्रीमको साथ लेटस र पुदीना तपाईं गर्मी को लागी Thermomix संग सजीलो एक तरकारी पकवान हुनेछ।
गर्मी सूर्यास्त जुस
गर्मी सूर्यास्त रस एक पेय हो जुन हामी थर्मोमिक्सको साथ २ मिनेटमा बनाउन सक्छौं र त्यसले गर्मीमा चम्किला छाला लिन मद्दत गर्दैन।
यस गर्मीमा खाजामा delicious स्वादिष्ट डिपहरू
रात्री भोजमा वा साथीहरूसँग खाजा खाने best उत्तम डिपहरूको साथ एक अद्भुत संकलन लेख। तपाईं यस गर्मी मा सफल हुनेछ!
प्रयोगको पेस्तो (हामीले छोडेको सलादको साथ)
जब हामी सलादमा सलाद र टमाटर थप्छौं तब दिमागमा राख्ने एउटा विधि। सजिलो, छिटो, धेरै बहुमुखी र स्वस्थ सामग्री सहित।
उष्णकटिबंधीय टचको साथ पास्ता सलाद
कुखुरा, अनानास, मक र गुलाबी सासको साथ स्वादिष्ट र विदेशी पास्ता सलाद। एक वास्तविक खुशी !! र यो अग्रिम तयारी गर्नका लागि उत्तम छ।
आडू र नेक्टाइनका साथ sweet मीठा रेसिपीहरू
आडू र नेक्टाइनसँग पकाउने समय अहिल्यै हो। तिनीहरू राम्रो मूल्यमा छन् र हामी ती व्यंजनहरूमा प्रयोग गर्न सक्दछौं जुन तुरुन्त खपत हुन्छ वा कम्पाइलेसनको लागि जुन तपाईंलाई पीचहरू र नेक्टाइनबाट अधिक फाइदा लिन मद्दत गर्दछ। तपाईंले संरक्षित व्यंजनहरू, डेसर्टहरू, एउटा केक भेट्टाउनुहुनेछ ...
भेगन तरबूज र एप्पल कोल्ड क्रीम
जे होस् स्कूलमा फिर्ती निकट र नजिक छ ताजा रेसिपीहरू तयार गर्न अझै लामो गर्मी छ। त्यसोभए तपाईंसँग आनन्द लिन कुनै बहाना छैन यो शाकाहारी खरबूज र स्याउ कोल्ड क्रीमको साथ तपाईं स्वस्थ, द्रुत र सजिलैसँग ढुवानी गर्न मिल्ने पदार्थहरू तपाईंको Thermomix को आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
अन्डा सेतो संग नीबू शर्बत
तपाईं राम्रो घर बनाउँने कागती शर्बत तयार नगरी गर्मीलाई पार गर्न सक्नुहुन्न। यो बनाउन सजिलो छ, सस्तो छ र तपाईं यसलाई फ्रिजरमा र Thermomix मा आरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ, शर्बत तयार गर्नु धेरै सरल छ। हामी यसलाई निम्न सामग्रीहरूसँगै गर्नेछौं: निम्बू, पानी, चिनी र अण्डा सेतो।
तरबूजाको साथ ref स्फूर्तिदायी व्यंजनहरू
तरबूजको साथ ref स्फूर्तिदायी व्युत्पन्नहरूको साथ यो संकलनको साथ तपाईं समृद्ध रस, स्लुजीहरूदेखि पहिलो डिश वा ककटेलसम्म तपाईंको Thermomix को साथ तयार गर्न सक्नुहुन्छ।
क्रीम tartlet र अंजीर
हाम्रो मनपर्ने कुकीको आटाको साथ, Thermomix मा बनेको क्रीम र कुनै पनि मौसमी फल हामी यसको रूपमा मिठाईको रूपमा मिठाई बनाउन सक्दछौं।
यस गर्मी को लागी9शानदार आइस क्रीमहरु
यस गर्मी को लागी9शानदार आईस क्रीम, सजिलो र सजिलो, आनंद लिन। घरेलु, परम्परागत, प्राकृतिक र धेरै स्वादिष्ट।
ओभन बिना स्वादिष्ट र द्रुत चिसो ह्याक केक। Thermomix को साथ बनेको ग्रीष्मकालीन नुस्खा जुन तपाईले धेरै पाउनुहुनेछ।
गर्मीका लागि ref स्फूर्तिदायी मिठाईहरू
Des डेसर्टको साथ उत्कृष्ट संकलन। तिनीहरू छिटो, सरल, सस्तो र सबै भन्दा माथि, धेरै धेरै स्फूर्ति मिठाई हुन्। तपाईं कस्तो रमाईलो देख्नुहुनेछ!
खुबानी, हरियो स्याउ र amaretto जाम
यस खुबानी, हरियो स्याउ र अमारेटो जामको साथ गर्मी को सबै भन्दा राम्रो प्याक गर्न तैयार हुनुहोस्। र यो त्यो हो, पहिले नै ...
कालो जैतुनहरूको साथ rec रेसिपीहरू
हामी तपाईंलाई rec रेसिपीहरूको साथ कम्पाइलेसन प्रस्ताव गर्दछौं जसमा कालो जैतुनहरू आवश्यक छन्। सधैं जस्तो, Thermomix मा बनेको।
पेपरिका सॉसमा स्क्विड
सॉसमा यी स्क्विड एक्लो, उमालेको आलु वा पास्ताको साथ परोस्न सकिन्छ। यदि तपाईं एक्लै उनीहरूको सेवा गर्नुहुन्छ भने, रोटी नबिर्सनुहोस्!
स्ट्रबेरी आइसक्रीम मोडेनाको बालसमिक सिरकाको साथ
Modena को balsamic सिरका संग स्ट्रबेरी आइसक्रीम कसरी तयार गर्ने पत्ता लगाउनुहोस्। एक मूल मिठाई, एक क्रीमयुक्त बनावट संग Thermomix को साथ धन्यवाद।
अण्डाहरू tzatziki र स्मोक्ड सामनले भरिएको
केही भिन्न भरिएका अण्डाहरू ग्रीष्म forतुका लागि उत्तम: tzatziki सॉस भरिएको र काली मिर्च को एक स्पर्श संग सामन धूम्रपान। एक महान स्टार्टर।
भुनी मिर्चको साथ चिसो तरकारी क्रीम
ग्रीष्म yourselfतुमा तरकारीको यो चिसो क्रीम र थर्मोमिक्सले बनेको भुनी मिर्चको साथ आफैलाई स्फूर्ति दिनुहोस्। तपाइँको ख्याल राख्ने एउटा विधि, सुन्दर देखिनुहोस् र हाइड्रेटेड रहनुहोस्।
यस ग्रीष्म forतुका लागि तरबूज र खरबूजासहित great उत्कृष्ट रेसिपीहरू
यस गर्मी को लागी fant शानदार मीठो र मीठो तरबूजा र तरबूज को रेसिपीहरु, ताकि तपाई यी दुई फलहरु मध्ये अधिक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
रातो लाईकोरिस आइसक्रीम
यो रातो मदिरा आईसक्रिमको साथ तपाईं गर्मी को लागि एक मिठाई हुनेछ। यो तपाइँको बचपन को सबै स्वाद र एक आकर्षक रंग छ। यो Thermomix को साथ गर्न पनि धेरै सजिलो छ।
अक्टोपस गैलिशियनको सलाद
यो गलिसियाली अक्टोपस सलादमा स्पेनिश ग्यास्ट्रोनमीको दुई ठूलो विधिहरू सबै स्वादहरू छन्। अब Thermomix को लागी संस्करण गरीएको।
सबैभन्दा स्फूर्तिदायी क्रीमनेस र बनावटको साथ एक आइसक्रीममा अमेरिकी मूलको लोकप्रिय कुरो लाइम पाईको सबै स्वाद।
ग्रीष्म फल फल
घरका सानाका लागि एक उत्तम नुस्खा र सम्पूर्ण परिवारलाई मनपर्दछ। यो फल आँगन एक्लै स्वादिष्ट छ, दहीको साथ, आइसक्रिमको साथ ...
चकलेट र दालचिनी आइसक्रीम
थर्मोमिक्सको साथ, यस घरको बनाएको चकलेट र दालचिनी आइसक्रिमको नरम बारीकाहरूको आनन्द लिनुहोस्।
वाष्पीकरण गरिएको दुध ल्याक्टोन्स
यस वाष्पीकरण गरिएको दुग्ध ल्याक्टोनियसको साथ तपाइँ तपाइँको ग्रीष्मकालीन व्यंजनहरू मजा लिन सक्नुहुन्छ सल्मोनेलोसिसद्वारा संदूषणको जोखिम बिना नै।
गर्मीमा रमाउन dev शैतानका अन्डा रेसिपीहरू
Stuff भरिएका अण्डा रेसिपीहरूको यस कम्पाइलेशनमा तपाईलाई गर्मीको आनन्द लिन र आफ्नो Thermomix को सक्दो फाइदा लिन सजिलो उपायहरू पाउनुहुनेछ।
चामलको सलाद प्राकृतिक टमाटर सॉस, लाइम र पुदिनाको साथ
एक प्राकृतिक टमाटर सॉस, चूना र टकसालको साथ उत्तम र रसदार चामल सलाद। तातो दिनहरूको लागि स्टार्टर वा साथीको रूपमा उत्तम।
चिसो सुन्तला तरबूज क्रीम
एक फरक स्टार्टर वा स्टार्टर, तयार गर्न सजिलो र छिटो, क्यान्टलूपो विविधताको खरबूजको साथ बनाईएको। यो सेरानो हेमको स्लाइसहरू संग परोल्न सकिन्छ।
ल्याभेन्डर निम्बू पानी
स्वादिष्ट र स्फूर्तिदायी लैभेंडर निम्बू जो हामीलाई लेमनमा भएका सबै राम्रा चीजहरू दिन्छ र हामीलाई आराम गर्न र समस्या बिना सुत्नको लागि मद्दत गर्दछ।
मेयोनेज र डिलको साथ चामलको सलाद
बासमती चामलको सलाद कर्नर, मेयोनेज र डिलको टचको साथ। गर्मी को लागि स्वादको एक राम्रो संयोजन। ताजा, रसिलो र धेरै धेरै स्वादिलो।
मन्चेगो चीज र क्रिस्पी लीकको साथ मक क्रीम
मीठा मकको गेडा र मन्चेगो चीजबाट बनेको स्वादिष्ट क्रीम। नरम, एक धेरै रमाईलो बनावट र एक धेरै नाजुक स्वादको साथ।
अचारको सिसाको साथ साधारण रूसी सलाद
क्लासिक रूसी सलादको विकल्प, आलु, मेयोनेज र अण्डामा सजीलो र द्रुतमा आधारित र यो सबै अचारको सिसाको शीर्षमा छ।
9 मीठो पेय र सुगन्धित जडिबुटी संग व्यंजनहरु
सुगन्धित जडिबुटीको साथ Thermomix मा बनेको9व्यंजनहरु को संकलन। तिनीहरू मिठो पेय र व्यंजनहरू हुन्।
अनानास, सुन्तला र खरबूजा आइसक्रीम स्मूदी
यो अनानास, सुन्तला र तरबूज आइसक्रीम स्मूदी स्फूर्तिदायी छ र प्राकृतिक फलको बारेमा सबै राम्रा चीजहरू छन्। समुद्री तट वा पोखरीमा लिनका लागि उत्तम।
अण्डाहरू मकै र अनानासले भरिन्छ
मकै, टुना र अनानास भरिएको छिटो र स्फूर्तिदायी अण्डा। गर्मी रातका लागि उत्तम किनभने तिनीहरू अग्रिम तयारी गर्न सकिन्छ।
यो साधारण दही र तरबूज "आइसक्रिम" कोशिस गर्नुहोस्। प्रकाश, स्फूर्तिदायी, तयार गर्न धेरै नै सजिलो र, यो कसरी अन्यथा हुन सक्दछ, ... उत्तम!
Cheesy मशरूम टोस्टहरू
के तपाई टोस्ट चाहानुहुन्छ? यो समय मशरूम र चीजको साथ। हामी एक सरल र अनौपचारिक खाना प्रस्ताव गर्दछौं, यी गर्मी दिनहरूको लागि आदर्श।
टुना साल्मोरजो। यस चिसो सूपको आनन्द लिने एउटा फरक तरिका Andalusian gastronomy को विशेषता। तातो कम गर्न को लागी एक राम्रो उपाय।
केरा र जाम स्मूदी
ताजा फल र घरेलु जामको साथ बनाईएको एक स्मूदी। एथलीटहरू र बच्चाहरूको लागि उत्तम, गुणहरूले भरिएको एक स्फूर्ति स्नैक
अण्डाहरू सालमन र टार्टर सॉसका साथ भरिएका छन्
साल्मन र टार्टर सासको साथ यी भरिएका अण्डाहरू minutes मिनेटमा तयार हुनेछन्। थर्मोमिक्सको साथ तपाईं कुनै जटिलता बिना, छिटो र सजीलो पकाउनुहुन्छ।
ह्याक र साल्मन पाई
ह्याक र साल्मन पाई हाम्रो मनपर्ने फिश टुक्राहरूको सबै स्वादको आनन्द लिने एउटा नयाँ तरीका प्रस्तुतीकरण भिन्न पारेर।
नर्डिक शैली कोलेस्ला
गोभी, आलु र डिलको साथ मेयोनेस सॉसमा आधारित ताजा र रसदार नुस्खा। तातो दिनहरूको लागि उत्तम।
थर्मोमिक्समा बनेको पास्ता बनाउने विधि। मौसमी तरकारीहरूद्वारा बनाइएको: प्याज, मरिच, ओबर्जिन, टमाटर ... धनी र तयार गर्न सजिलो।
टोस्टमा गोभी र चेरी सलाद
के हुन्छ यदि हामी टोस्ट मा सलाद सेवा? के हामी कच्चा बन्दकोबी प्रस्तुत भने? सबै विकल्पहरू साधारण र मूल ग्रीष्म विधिहरू पाउनका लागि हुन्।
टमाटर र तुलसी संग उमालेको हरियो सिमी
टमाटरको साथ हरियो बीन्स, हाम्रो भान्साको एक क्लासिक। यस अवस्थामा, हामी गेरामिन कन्टेनर प्रयोग गरेर सिमी स्टीम गर्नेछौं।
कोका डे सान जुआन
कोका डे सान जुआन। क्याटालान ग्यास्ट्रोनोमीको विशिष्ट समृद्ध मिठाईको सबै स्वादहरूको आनन्द लिनुहोस्। एक मीठो र स्वादिष्ट खाजा।
धूम्रपान साल्मन र नॉर्डिक ड्रेसिंगको साथ ब्राउन राइस सलाद
सजिलो, धनी र अत्यन्त स्वस्थ चामल सलाद। स्मोक्ड सामन र नर्डिक स्मोक्ड सॉसको साथ यो एक शानदार संयोजन हो।
गर्मी को छाला को लागी रस
सुन्तला, गाजर र अजवाइन मा आधारित छाला को लागी गर्मी को रस। Thermomix को साथ स्वादिष्ट, स्वस्थ र बनाउन सजिलो। र केवल २० किलो क्यालोरीको साथ।
Andalusian gazpacho। कसरी Thermomix मा Andalusian गैस्ट्रोनोमी को सबैभन्दा धनी व्यंजन को एक बनाउन को लागी पत्ता लगाउनुहोस्। आफैलाई स्फूर्ति दिन स्वस्थ र पौष्टिक विकल्प।
अण्डाहरू प्याटेको चीजले भरिन्छ
थर्मोमिक्सको साथ प्याटोले भरिएको अण्डा तयार गर्नु सरल र छिटो हो। तिनीहरू अग्रिममा गर्न सकिन्छ र तपाईंको रमाइलो गर्न समय किन्नुहोस्।
चकलेट रम आइसक्रीम
रमको साथ चकलेट आइसक्रीम। हाम्रो थर्मोमिक्सको साथ घर आइस क्रिमहरू बनाउन कत्ति सजिलो छ पत्ता लगाउनुहोस् जुन उत्तम आइसक्रिम पार्लरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ।
हेजल्नट र अजमोदको साथ पास्ता
मूल, धेरै स्वादको साथ र घर भित्र वा बाहिर लिनका लागि किनभने यसलाई चिसो पनि प्रदान गर्न सकिन्छ। हेजल्नट, अजमोद, पनीरका साथ ... गुणहरूले भरिए!
Varoma मिर्च सलाद
Varoma मिर्च सलाद। परम्परागत ओभन भुनी मिर्च सलाद को एक विचित्र संस्करण। तपाईं यसको स्वाद मनपर्नेछ।
सुन्तला र चकलेट मूस
चकलेट चिपहरूको साथमा रोमान्टिक र नाजुक सुन्तला मूस। भ्यालेन्टाइनको दिन आश्चर्यचकित गर्न वा राम्रो मिठाईको साथ खाना समाप्त गर्नका लागि आदर्श।
बच्चाहरूको लागि Gazpacho
परम्परागत गजापाचोको संस्करण, साना बच्चाहरूको आवश्यकता र रुचिमा अनुकूलित। खाजा र डिनरको लागि एक स्टार्टरको रूपमा आदर्श।
चिसो काकडी र नरिवल दुध सूप
शाकाहारी आहारको लागि उत्तम सूप। पुदिना, डिल, काकडी र नरिवलको दुधको नरमताले यस थाललाई वास्तविक आनन्द दिन्छ।
खरबूजा मोजिटो एक स्फूर्तिदायी गैर-मादक पेय हो जुन गर्मीमा रमाउनको लागि हो। यो Thermomix को साथ गर्न पनि धेरै सजिलो छ।
Acai popsicles गर्मी को लागी उत्तम छ किनकि उनीहरूले हामीलाई ताजा, हाइड्रेट र एन्टिऑक्सिडन्ट्सको साथ पोषण दिन्छ। तिनीहरूलाई घरमा बनाउने कहिले सजिलो हुँदैन।
अण्डाहरू लसुनको झींगाले भरिएको छ
धेरै नै सुरुवाती: अण्डाहरू लसुनको झींगा र एउटा सेतो सॉसले क्रीम चीज र मेयोनेजबाट बनेको हुन्छ।
अचार टुना संग गर्मी cannelloni
यी ग्रीष्म llतुमा क्यान्नेलोनीलाई अचारको साथ बनाउनुका लागि हामीलाई चुलोमा खोल्न आवश्यक पर्दैन। तिनीहरू पनि प्रकाश छन् किनकि उनीहरूसँग béchamel सॉस छैन।
मटर र मशरूम सूप
मटर र मशरूमको सरल र स्वस्थ क्रीम कसरी तयार गर्ने भनेर हामी तपाईंलाई सिकाउँछौं जुन तातो र चिसो दुवै लिन सकिन्छ।
साधारण चकलेट केक जुन एक थर्मोमिक्समा तयार पारिन्छ र १० मिनेटमा माइक्रोवेभमा पकाइन्छ। ग्रीष्मकालीन केक, सजिलो र चुलो बिना।
Dulce de leche आइसक्रीम
यस dulce de leche आइसक्रिमको साथ गर्मीको आनन्द लिनुहोस्। आदर्श मिठाई वा खाजा। घरमा यो गर्नु हाम्रो Thermomix को साथ कहिल्यै सजिलो छैन।
गर्मी को लागी9चिसो भाँडा
तपाइँको थर्मोमिक्सको साथ यस गर्मी को लागी सबै भन्दा राम्रो cold वटा ठण्डा व्यञ्जनहरू, जुन तपाइँ समुद्री तट वा पोखरीबाट आउँदा पिउन र तयार हुन सक्नुहुन्छ।
यसको रंग, स्वस्थ र धेरै धनीको लागि एक स्फूर्तिदायी प्लम स्मूदी धेरै रमाइलो छ। यो हाम्रो Thermomix संग एक क्षण मा तयार छ।
घरेलु isotonic पेय
यस होममेड आइसोटोनिक पेयको, र color्ग वा संरक्षक बिना आनन्द लिनुहोस्। २ मिनेटमा र प्राकृतिक अवयवहरू सहित तयार। यदि तपाईं आफैंको देखभाल गर्न चाहानुहुन्छ भने आवश्यक छ।
पेपरमिन्ट नींबू पानी
ताजा र स्वादिष्ट लिम्बू पानी, पुदीनाको एक विदेशी स्पर्श संग। केवल २ सेकेन्डमा, हामीसँग एक उत्तम पेय पदार्थ तयार हुनेछ।
माइक्रोवेव स्पंज केक (कागती)
यो धेरै, धेरै तातो छ। यति धेरै खाना पकाउन अल्छी छ। र भट्टीलाई सकृय पार्ने बारे के सोच्दै ... तर ...
केरा र खुबानी स्मूदी
ग्रीष्मकालीन चिकनी खुबानी, केरा र दुधको साथ बनेको। भिटामिनले भरिएको छ र यी तातो दिनमा स्नैक्सको लागि आदर्श हो।
फल र दही मिठाई
मिठाई वा सम्पूर्ण परिवारको लागि बिहानको खाजा र फल प्रयोग गर्नका लागि घर मा खराब गर्न सकिन्छ। यो खाद्यान्न, चकलेट संग परोस गर्न सकिन्छ ...
मिनी चकलेट चिप मफिनहरू
चकलेट चिप्सका साथ फन मिनी मफिनहरू। तिनीहरूलाई साथीहरूसँग भेट गर्नको लागि उत्तम, विशेष गरी यदि बच्चाहरू छन् भने।
Skewers मसलाको साथ मरीनेट गरिएको
मसलाको साथ मरीनेट गरिएको केही रिच स्कीभर्स तयार गर्न धेरै सरल छ। हामी तपाइँलाई थर्मोमिक्सको साथ यसलाई कसरी चाँडो गर्ने भनेर देखाउँदछौं।
फिब्यू aubergine र बाख्रा पनीर संग
एक अलग फिदेयू, औबर्जिन र बाख्रा पनीरको साथ बनाईएको। अग्रिम तयार छोड्नु वा टुपरवेयरमा बोक्नको लागि आदर्श।
कच्चा शाकाहारी चीज
कच्चा शाकाहारी चीजले यसको सरलता र स्वादको साथ तपाईलाई चकित पार्नेछ। काउज र बदामबाट यसलाई सजिलैसँग कसरी बनाउने भनेर हामी तपाईंलाई देखाउँदछौं।
Nectarine अर्ध चिसो
फ्रोजन मौसमी फल र मलाईदार दहीबाट बनेको स्वादिष्ट र स्फूर्तिदायी मिठाई। साना बच्चाहरूलाई फल दिनको लागि आदर्श।